Somaliland Waxay U Baahan Tahay Mucaarad Waji Cusub Leh Balse Uma Baahna… | Somaliland.Org
September 30, 2011	Somaliland Waxay U Baahan Tahay Mucaarad Waji Cusub Leh, Balse Uma Baahna Raggii Ku Suntanaa Wiqitaankii Halgankoodii
Maqaalkan kooban cid ulama jeedo, cidna ugu hiilin maayo balse waxaan ku sheegaya xaqiiqda dhabata ah ee ka jirta Somaliland, waayo mu-waadinimadu waxay u baahantahay dhiranaan iyo in xaqa laga sheego wixii jira. Shayga xorriyad hadalku waa astaanta Dimuquraadiyadda, waana mida ay Somaliland maanta ku nabad iyo caano maashay. Somaliland waxaa ka jira dimuquraadiyad dhab ah, Saxaafad xor ah, adoo cabirikara rayigaaga iyo waxaad tabanayso si xor ah. Taas oo aan ka jirin badi waddamada Afrika ama Geeska Afrikaba. Balse Somaliland waxaa kajira nasiib darro kale taaso ah, in aanu jirin wax la yidhaahdo Xasuus Siyaasadeed. Si kale haddii loo dhigo xasuusta siyaasiga ahi waxay tahay. Qofka aadamaha ahi wuxuu leeyahay Soyaal tarikheed oo uu soo maro. Ka soo ay ugu muhiim santahay mihnadiisa shaqo ama hoggaamineed. Siyaasiguna ama qofka siyaasadda ku abtirsadaa wuu ka sii xagjiraa Waxaa yaaba haddaba Somaliland kama jirto xasuus Siyaasi ah. Waxaad arkaysaa mid kamid ah dadkii ugu soyaalka xumaa tarikhiyan ummadda Somaliland oo haddana ka hadlaaya ama iska dhigaaya mid lexejeclo u haya ummadda iyo shacabka masakiinta ah. Tasoo nasiib daradda kale ee jirtaa ay tahay dadkii oo aan uba shegeyan qofkani inuu yahay kii shalay.
Markii shirkii Burco ee May 1991 lagula soo noqday madax banaadida Somaliland waxaa si toosa loo hirgaliyay Samaxaad dhammaan beelaha Somaliland, mid tageeray Halgankii shacbaka ee Xalaasha ahaa ee SNM iyo mid aan tageerinba. Lakiin lama samixin kuwii dalkan iyo dadkan ka galay haragdaamada iyo danibiyada. Kaga Darane nasiibku inuu cajiib yahay kuwii sidaas ahaa ayuu markale jaanisku siiyay inay dib u badhaan shacabkii dagalada ka soo doogay, Xubnaha aan ka hadlayaa waa Wasiiradii ugu tunka weynaa Xukuumaddii Daahir Rayaale Kaahin, ku waas oo Nasiib u helay yagoo aan ka digigixan markii dadkooda diyaaradaha lagu garacayay balse iska daayo wakhtigaas roodhida kula dhuqaayay Nadaamkii Maxamed Siyaad Barre. Waxay ashkhaastasi Hadana markale ummadda ku soo noqdeen yagoo waji kale sita, waxayna ku kaceen Musuq Maasuqii ugu baaxada weynaa abid ee Somaliland ka dhaca. Yagoo ay u hirgashay waxaas oo dhami si kastaba hawgu hirgashee waxay ummaddu sugaysay maanta mar haddii ay ku badaleen fartooda in aanay dib ugu soo noqon, isla markaana ay calafsadaan wixii ay ummadda ka qateen. Balse Nasiib daradda dhacday waxay tahay, inay wali soo taganyihiin Saxaafadda horteeda yagoo ilmada Yaxaaska dadinaaya, waxayna ka dhigteen halqabsi Somaliland Koonfur ayaa lagaynayaa, waar Somaliland maanta 3.5 Milyan oo qof ayaa ilashanaaye, maalintii ay hiilka u baahnayd ee ay jilicsanayd ee Diyaaradaha lala dhacaayay xageed joogtay??. Markii danbe ee aad soo noqotay ee aad xilka u qabat maxaad shacabka wax horumar ah u gaysatay, Hal Iskool ama Caafimad ma u dhistay, Musuq maasuq ma ku kacday ?? Su´aalahaas inay shacabku waydiiyaan ayay ahayd. Waxaa laga yaaba in ay dadka qaar qariib sadaan siduu Madaxweynaha Somaliland ugu jawaabay Siciid Sulub Wasiirkii hore ee Guryaynta iyo xunbaha kale. Haddaan Siciid Sulub oo kale soo qaato waxaa wali taagan tuhunkii uu kaga qayb qaatay shirqool lagu wiiqaayay Halgankii SNM, kasoo lagu Dilay Suldaan micno weyn ugu fadhiyay wakhtigaas Halkankii SNM. Oo Waliba ay isku beel hoose yihiin Siciid Sulub Wasiirkii hore ee Gaadiidka iyo guryaynta. Mid aan dhagar ku suntanayn kuma jiro ragga maanta bu’aaya. Waxaa yaaba inay maanta hadana leeyihiin dalka Koonfur ayaa la gaynayaa, maxaad maalintaad wiiqaysay Halgankoodii xorriyada keenay ugu hiilin wayday. . Sowdigii roodhida subagale kula dhuqaayay Nadaamkii waxaas samaynaayay..
Ummaddi haddii aanay tariikh lahayn ummmad jirta oo joogta ma noqoto. Qofku maha inuu dhibsado tariikhdiisa uu calafsaday, balse waa inuu runta isu sheega shacabkuna u shegaan. Waxaan Xalay arkaayay Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng: Faysal Cali Waraabe oo dafiraaya hadalkii Ufo. Tollow Faysal muxuu u dafiri waayay nuqulada uu kaga yaalo Buuga Muj; Maxamed Baaruud oo kamid ahaa hormuudkii dhalinyaraddii Ufo, ka soo uu ku xusay doorkii uu ku lahaa xadhigii Ufo, Faysal Cali Waraabe shay kasta oo qabyaalad loo adeegsado ayuu sameeyay, siduu maanta uga hadli karaa danta Somaliland oo mid ah waa arrin aan dabiici ahayn. Waxaan maqaalkaygan kooban ku soo xidhayaa Somaliland waxay u baahantahay Mucaarad xalaal ah oo shacabka u danaynaaya, balse uma baahna nin ka soo danaystay haddana doonaaya inuu ka danaysto. Shakhsiyaad shacabku soo tijaabiyeen oo ummaddu si mugleh u taqaano waxaa wajiba in runta loo sheego.. Dadkeena xauun qabal ah ayaa lagu saliday oo ay qofka ka eegayaan, balse wadaniyad nimadu waxay u baahantahay dhiranaan iyo inaad si cad runta u sheegto.
London- Email: muniir10@gmail.com
Previous Post‘Axmed-Siilaanyo Ciddii Doontaaba ha iska Hadashee waa Mujaahid, Aniguna Waxaan ka mid ahaa RaggiiNext PostJaamacada Gollis oo soo kordhisay kuuliyad cusub oo Islaamiya	Blog